Yangon Building Permit System Receives 1,000 Applications in Five Months | Myanmar Business Today
HomeBusinessYangon Building Permit System Receives 1,000 Applications in Five Months
The Yangon City Development Committee (YCDC) has received over 1,000 building permit applications through the Yangon Building Permit System (YBPS),afully automated system making all processes related to building permits including inspection requests completely online, significantly improving processing times, in just five months of operations.
The YPBS was designed to boost private investment in the city’s construction sector. The system, an initiative of IFC, aims to reduce work procedures, eliminate the need for paper applications, and cut frequent meetings between staff and applicants.
“The YBPS online application system has shown to be effective as building professionals can submit their applications anywhere and at any time. This hadasignificant positive impact during COVID-19,” said Daw Hlaing Maw Oo, YCDC Secretary.
The initiative, with support from the Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) of the United Kingdom and the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), has helped modernize the permit system, providing new software and training for staff. A one-stop-shop has also been opened for prospective builders to obtain construction permits.
Myanmar is trying to haveabetter ranking at the World Bank’s Ease of Doing Business Index and dealing with construction permits is one of the 10 subindices that the index is based upon.
The ten subindices are startingabusiness, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, and resolving insolvency.
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (YCDC)သည် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြစ်သည့် “ရန်ကုန်မြို့တော်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်စနစ် (YBPS)”ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးပါမစ်လျှောက်လွှာ ၁၀၀၀ကျော်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကို စစ်ဆေးခြင်းများအပါအဝင် လျှေက်လွှာ လျှောက်ထားမှုများကို အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်စနစ် (YBPS) သည် မြို့တော်၏ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တိုးတက်လာစေရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့(IFC)က ဦးဆောင်ပြီး၊ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်များလျှောက် ထားရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလျှော့ချရန်၊ စာရွက်စာတမ်း၊ လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များကိုလျှော့ချရန်၊ ၀န်ထမ်းများနှင့် လျှောက်လွှာလျှောက်ထားသူများအကြား၊ မကြာခဏတွေ့ဆုံနေရခြင်းများ မလိုအပ်တော့ရန် ရည်ရွယ်သည်။
“ရန်ကုန်မြို့တော်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်စနစ် (YBPS) ဟာ ထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ အွန်လိုင်းစနစ် ဖြစ်ကြောင်းကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးပညာရှင်များ (အင်ဂျင်နီယာ ၊ ဗိသုကာ) နှင့် မြေပိုင်ရှင်များဟာ အချိန်မရွေး၊နေရာမရွေး လျှောက်လွှာများကို အွန်လိုင်းကတဆင့် လျှောက်ထား နိုင်ပါတယ်။ ဒီတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဟာ Covid-19 အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း သိသာထင်ရှားတဲ့ အပြု သဘောဆောင်တဲ့ သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်လှိုင်မော်ဦးက ပြောကြားသည်။
United Kingdom၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဌာန (DFID) နှင့်Australian နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဌာန(DFAT)တို့ နှင့် ပူးပေါင်းပံ့ပိုးမှုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်စနစ် (YBPS) ကို ခေတ်မှီစေရန် အတွက် software အသစ်များနှင့်ဝန်ထမ်းများအတွက် လေ့ကျင့်မှု ပေးမှုများကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ဤစနစ်သစ်သည် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်သူများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးပါမစ် များ တစ်နေရာတည်းတွင် ရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဟာ အလုပ်သမားအင်အားရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် (အလုပ်သမားတစ်သန်းခန့်) ရှိနေပြီးတော့ ဒီကဏ္ဍဟာ လူအများအတွက် အမြင့်ဆုံး၀င်ငွေရဖို့ အလားအလာရှိ နေပါတယ်။” ဟု IFC ၏ မြန်မာ နိုင်ငံ နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် Ms. Jane Xu က ပြောကြား သည်။ “ဆောက်လုပ်ရေး ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို လွယ်ကူချောမွေ့အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုကို တိုးမြှင့်စေခြင်း၊ ကြိုးနီစနစ်ကိုလျှောချစေခြင်း နဲ့ ဆောက်လုပ်ခွင့်များထုတ်ပေးရာမှာ ပိုမိုမြန်ဆန်လာစေဖို့အထောက်အကူပြု ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုဟာ ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးဖို့ရာမှာပါများစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာ ဖြစ်သလို၊ဒီလိုလုပ်ဆောင်တာဟာ IFC ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်စဥ်တွေထဲက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရ လွယ်ကူမှုအညွှန်းကိန်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက် တိုးတက်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီး အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များမှာလည်း အညွှန်းကိန်းတွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဥ်းစားသည့် အခန်းကဏ္ဍ ၁၀ ခုအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Previous articleFDI surpasses $5 billion; yet to meet the FDI target
Next articleThree Ways to Go for Myanmar’s Beans and Pulses Industry